मिस वर्ल्ड भाेटिङमा नेपाली सुन्दरी श्रृंखला उपाधि नजिक::Online News Portal from State No. 4
मिस वर्ल्ड भाेटिङमा नेपाली सुन्दरी श्रृंखला उपाधि नजिक
श्रृंखला ३५.१ प्रतिशत भोटका साथ शीर्ष स्थानमा छिन्। ११.३३ प्रतिशत मतका साथ उनलाई मंगलोलियाकी इन्कारिमा इर्डेनबाटारले पछ्याइरहेकी छिन्।
बागलुङ, १२ मंसिर – मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा सहभागी सुन्दरीलाई अनलाइन भोट गर्न पाउने अन्तिम समयसम्म नेपाली सुन्दरी श्रृंखला खतिवडा ठूलो अन्तरसहित शीर्ष स्थानमा छिन्। मल्टिमिडिया विधामा सुन्दरीहरूलार्इ भोटिङ गर्न पाउने आज अन्तिम दिन हो। ठूलो अन्तरसहित शीर्ष स्थानमा रहेका कारण अबको केही घन्टाभित्र ठूलो फेरबदल नभए मिस वर्ल्ड मल्टिमिडिया अवार्ड श्रृंखलाको पोल्टामा पुग्ने देखिएकाे हाे। मिस वर्ल्डको फाइनलमा पुग्नु अघि पार गर्नुपर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण चरण हो। विभन्न विधाबाट छानिएका उत्कृष्ट सुन्दरीहरु फाइनल राउन्डमा पुग्छन्। बुधबार जापानकी सुन्दरी कनाका डेटले मिस ट्यालेन्टको उपाधि हात पार्दै फाइनल राउन्डमा स्थान सुरक्षित गरेकी छिन्। फ्रान्सकी माइभा कोउकेले टप मोडेलको उपाधि हात पार्दै फाइनलमा स्थान बनाइसकेकी छिन्। हुन त नेपाली सुन्दरी श्रृंखला मल्टिमिडिया बाहेक ‘ब्युटी विथ प्रपोज’ र ‘हेड टू हेड च्यालेन्ज’मा पनि बलियो दाबेदारी पेश गरिरहेकी छिन्। मल्टिमिडियामा शीर्ष स्थान कब्जा गरे उनी यसबाटै फाइनल राउन्डमा पुग्नेछिन्।
भोटिङको स्थिति कस्तो छ ?
यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालीकी सुन्दरीलाई चुनौती दिने स्थिति कसैकाे देखिँदैन। श्रृंखला ३५.१ प्रतिशत भोटका साथ शीर्ष स्थानमा छिन्। ११.३३ प्रतिशत मतका साथ उनलाई मंगलोलियाकी इन्कारिमा इर्डेनबाटारले पछ्याइरहेकी छिन्। तेस्रो स्थानमा रहेकी भियतनामकी भ्या ट्यारानको ८.८६ प्रतिशत मत छ। भारतकी अुनकृति भाषले बुधबार ह्वात्तै भोटिङ प्रतिशत बढाएकी छिन्। तर पनि उनले नेपालकी श्रृंखलालाई चुनौती दिन सकिरहेकी छैनन्। उनी ८.०८ प्रतिशत मतका साथ उनी चौथो स्थानमा छिन्।
कसरी गर्ने भोट ?
श्रृंखलालाई अनलाइन भोट गर्न तीन बाटाहरु छन्। मोबस्टार एप डाउलोड गरेर भोट गर्न सकिन्छ। यसैगरी उनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा लाइक र कमेन्ट गर्दा पनि त्यसले उनको भोटिङ प्रतिशत बढाउँछ। यो बाहेक मिस वर्ल्डकाे आधिकारिक वेब साइटमा लगइन गरेर समेत भोट गर्न सकिन्छ।